कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिन लगाएकाहरुले जान्नै पर्ने ६ प्रश्नको जवाफ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कुन स्तरको संरक्षण प्राप्त हुन्छ भन्नेमा व्यापक अन्यौल रहेको छ । भ्याक्सिन लगाएकाहरुपनि कसरी कोरोनाबाट संक्रमित भए ? के भ्याक्सिनले संक्रमण हुनबाट जोगाउँदैन ? भ्याक्सिन लगाएपछि संक्रमण भएमा त्यस्ता व्यक्तिले अरुलाई सार्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यस्ता कैयन प्रश्नहरु विद्यमान छन् ।
रोयल मेलबर्न इन्स्टीच्युट अफ टेक्नोलोजीकी भ्याक्सिन विज्ञ कायली क्वीन भ्याक्सिन लगाउनुलाई सिटबेल्ट लगाउनुसँग तुलना गर्छिन् । सिटबेल्ट लगाउँदैमा सधै घाइते हुनबाट जोगिन्छ भन्ने छैन तर लगाएको खण्डमा दुर्घटना भइहालेमा अधिकांश समय घाइते हुनबाट वा गम्भिर घाइते हुनबाट भने जोगाउन सक्छ ।